Mpandinika rano fisotro, mpamantatra rano avo lenta - Sinsche
Colorimeter azo entina
Q Series Colorimeter azo entina
Tontolo iainana- Fitsapana rano maloto
Famatsiana rano ao an-tanàna
Laboratoara sy fanabeazana
Pool sy Spa
Iza isika ary inona no ataontsika?
Sinsche dia mpanamboatra sy mpamatsy teknolojia manaparitaka manerantany, natao ho an'ny famakafakana sy fanaraha-maso ny rano. Niorina tamin'ny 2007 tao Shenzhen PR China, ny ekipanay manam-pahaizana manokana dia natokana amin'ny fampivelarana sy fanohanana fomba sy fitaovana vaovao, hahafahan'ny valiny haingana sy marina ary mahomby avy amin'ny tontolo iainana mafy indrindra, mankany amin'ny laboratoara maoderina.
Ny tsipika fampitaovana sy ny simika sinsche dia noforonina nandritry ny 14 taona mahery mba hanaovana ny famakafakana ny rano ho tsotra, tsara kokoa - haingana kokoa, maitso ary manome fampahalalana bebe kokoa.
T-CP40 Colorimeter azo alefa amin'ny rano fisotro
TA-98 Spectrophotometer hita maso UV
K600 mpandinika an-tserasera amin'ny rano
Q-CL501 Colorimeter azo alefa ho an'ny Chlorine maimaim-poana, ...
Z-T700 / Z-T500 maramara marobe Ana ...
Meterim-bola mora vidy avo lenta ho an'ny aquaculture Fac ...
Mianara bebe kokoa momba ny masontsivana momba ny kalitaon'ny rano:
avy amin'ny adminJun-17-2021
Olana iraisana amin'ny famaritana ny kalitaon'ny rano lomano
Amin'ny fahavaratra, ny toerana filomanosana lehibe dia lasa toerana mangatsiatsiaka amin'ny be sy ny maro. Ny kalitaon'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano amin'ny pisinina dia tsy ny mpanjifa be fanahiana ihany fa ny tanjon'ny fanaraha-maso ifotony ataon'ny departemanta misahana ny fahasalamana. Mikasika ny detection sy managem ...
Famantarana klorika sisa tavela: maimbo nefa tsy misy loko?
Ao amin'ny tontolon'ny andrana ataontsika, misy marika marobe tokony refesina, ny klôria residual dia iray amin'ireo tondro izay mila faritana matetika. Vao tsy ela akory izay, nahazo valiny avy tamin'ny mpampiasa izahay: Rehefa mampiasa ny fomba DPD handrefesana ny chlôlôly sisa tavela dia maimbo mavesatra ny fofony, saingy ny andrana ...
Valiny momba ny olan'ny rano fisotro mahazatra
Ny rano no fototry ny fiainana, ny rano fisotro aza mbola zava-dehibe kokoa noho ny mihinana. Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalaman'ny olona, ​​ny rano amin'ny paompy dia nojerena bebe kokoa amin'ny lafim-piainana rehetra. Androany, Sinsche dia mametaka olana mafana marobe, hahafahanao manana fahatakarana lalindalina kokoa ...
Mpanamboatra sy mpamatsy teknolojia manaparitaka manerantany, natao hamakafaka sy hanaraha-maso ny rano.